सरकारमा सहभागी यो टिम एमाले इतिहासकै कमजोर | Tinau FM 98.2 Mhz
योगेश भट्टराई, सचिव नेकपा एमाले
१८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको आलटालका कारण असारमा संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था देखापरेको बताएका छन् । तर, साउनको दोस्रो सातासम्म संविधान आउने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
महिलामाथि अभद्र गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीमाथि अब पार्टीको अनुशासन समितिले छानविन गर्ने भट्टराईले बताए । योग्यताका आधारमा भन्दा गुटका आधारमा मन्त्री बनाएकाले महिनैपिच्छे मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा स्पष्ट पारे ।
एकपछि अर्को गर्दै एमालेका मन्त्रीहरु विभिन्न लफडामा फसिरहेका छन् । यो संयोग मात्रै हो कि के हो ?
– एमालेको इतिहासमा सरकारमा सहभागी यो टिम सबैभन्दा कमजोर सावित भएको छ । यसपटक मन्त्रीहरुको छनोट नै लापरवाही ढंगले भयो । योग्यताका आधारमा, मापदण्डका आधारमा, नीति-नियमका आधारमा भन्दा गुटका आधारमा नामहरु छनोट भएको थियो । यस्तो टिमले अरु के गर्न सक्थ्यो ?
मन्त्रीहरुले यसरी अनेकन् हर्कत गरेर हिँड्दा एमालेको छवि धुलिसात् हुँदैन ?
– पक्कै पनि । यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरु आफ्नो आचरणमा नबस्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । पटक पटक हामीले पार्टी अध्यक्षलाई भनेका छाैं कि मन्त्रीहरुको काम-कारवाहीका बारेमा समीक्षा होस् । अध्यक्षले पनि मन्त्रीहरुलाई सामुहिक रुपमा बोलाएर छलफल गर्ने भन्नुभएको हो, तर गर्नुभएन । त्यस्तो गरिएको भए यसरी महिनैपिच्छे मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
एमाले संविधान निर्माणपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिएको छ । सरकारमा दोस्रो हैसियतमा रहँदै यस्तो हालत छ भने नेतृत्व नै लिए भने के गर्लान् भन्ने चिन्ता जनतामा थपिएन ?
– हो, हामी सरकारको नेतृत्वमा जाने परिस्थिति बन्दै छ । अब बन्ने सरकारमा मन्त्रीको छनोट गर्दा बहुतै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले पार्टीभित्रका सबभन्दा योग्य मानिसहरुलाई टिममा लैजानुपर्छ । त्यसो भए मात्र उहाँले आफ्नो र पार्टीको प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्नुपर्छ । अहिलेको टिमको असफलताबाट सिकेको पाठ यही हो ।